लकडाउनविरुद्ध हतियारसहित उत्रिए प्रदर्शनकारी — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कोरोना > लकडाउनविरुद्ध हतियारसहित उत्रिए प्रदर्शनकारी
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइसरका कारण दुई लाख ३४ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा मात्रै ६३ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
त्यहाँ १० लाखभन्दा बढी मानिसमा यसको संक्रमण देखिइसकेको छ। यो दर निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको आँकडामा देखिन्छ। कोरोना संक्रमण रोक्न अमेरिकी सरकारले पनि देश लकडाउन गरेको छ। तर त्यहाँ लकडाउनको विरुद्ध पछिल्ला केही दिनयता विरोध भइरहेका छन्।
खासगरी अमेरिकाको मिसिगन राज्यमा लकडानका कारण मारमा परेको र निसास्सिएर बस्नुपरेको भन्दै लकडाउन खुलाउन आन्दोलन चर्काइएको छ। जहाँ केही मानिस हतियारसहित प्रदर्शन उत्रिएका अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
खासगरी मिसिगनको राजधानी लासिंगमा मानिसहरु घरबाहरि निस्केर सरकारले लगाएको लकडाउनको विरोध गरिरहेका छन्। समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका तस्बिरमा केही प्रदर्शनकारीले हतियार बोकेर सडकमा उत्रिएको देखिएको बताइएको छ।
अमेरिकाका अन्य राज्यमा पनि लकडाउनविरुद्ध मानिसहरु सडका उत्रन थालिसकेका छन्। मिसिगनमा गत २३ मार्चबाट राज्यभर लकडाउन गरिएको थियो।
२०७७ वैशाख १९ गते ११:०० मा प्रकाशित
मेलम्ची खानेपानीको काम जारी, असारमा पानी ल्याउने लक्ष्य
प्राईमको सेयर किन्नुभयो ? हकप्रदका लागि भोलि बुक क्लोज हुँदै !
बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन, तपाईले आवेदन दिनुभयो त ?
अब लाईसेन्स नभएकालाई सवारी दिने सवारीधनी पनि ट्राफिक कारबाहीमा